Vaovao - Mamaky ny stereotype ny kilalao fanaovana firaisana ara-nofo- Ny fahatsapana orgasm avy amin'ny andiany Clayderman
Mamaky stereotype ny kilalao fanaovana firaisana ara-nofo- Ny fahatsapana orgasm avy amin'ny andiany Clayderman
Amin'ny maha veterana amin'ny sehatry ny firaisana dia Greenbaby dia nandefa andiany stimulator vaovao mitsentsitra Clayderman tamin'ny volana septambra tamin'ity taona ity-mamela ny vehivavy hahatratra ny tampony haingana sy mivantana, ary afaka manampy ny vehivavy mbola tsy nahita ny fara tampon'ny fahafinaretana na koa tsy nisy, ary fantaro ny orgasme miafina miafina.
Ny stimulator mitsentsitra Clayderman dia tsy mitovy amin'ireo kilalao fanaovana firaisana ara-nofo teo aloha satria izy io dia mampiasa teknolojia fitsentsenana omnidirectional, fametahana clitoris 360 ° hoentanentanana lalina, amin'ny alàlan'ny fitsongoan-tongotra matetika, ny lalao orgasme ao amin'ny halalin'ny fanahy, ary tena tafiditra ao anatin'ny fahafinaretana mitsentsitra. entin'ny feon-kira onjam-peo izay mitondra ny resonance ny clitoris iray manontolo. Rehefa mihalalina ny fientanam-po, dia hipoitra avy hatrany ny fahafinaretana, mamela anao hanana orgasme ao anatin'ny fotoana fohy, mitondra fahatsapana fahafinaretana amin'ny vatana iray manontolo.
Ny lohan'i Clayderman dia afaka mifanaraka tsara amin'ny faritra manokana ary mitandrina tsara ny tsaramaso adzuki mora tohina. Na ny vehivavy tsy mbola nanana traikefa ara-nofo aza dia afaka manomboka haingana sy mankafy ny orgasme haingana mandritra ny minono. Manentana teboka marefo hafa toy ny tratra, toy ny olon-tiana mitsangantsangana amin'ny zipo.
Ny simulator mitsentsitra Clayderman miaraka amina endrika endriny iray manontolo, ho an'ny rano 100% ary afaka misoroka bakteria. Mety kokoa ny manasa azy io, ary azo ampiasaina amin'ny seho anaty rano toy ny fandroana koa hankafizanao ilay fitiavana. Misy fomba fitondra-minono 7 samy hafa, mety ho an'ny vehivavy samy manana ny filàny. Ampiasaina amin'ny tariby famandrihana USB voatokana, izay mora entina sy averina ampiasaina.
Ary koa, ny mpanentana antsika mitsentsitra endrika mahafatifaty ary azo avela ao an-trano hisorohana fotoana tsy mahamenatra tsy ilaina. Mavesatra sy mavesatra ihany koa izy io, azo entina miaraka aminao rehefa mivoaka ianao, azo tazonina amin'ny tanana kely ary azo entina am-paosy. Andramo matetika, ary matanjaka kokoa ny traikefa azo tsapain-tanana.
Raha taova mahagaga ny clitoris natao ho an'ny fahafinaretan'ny vehivavy, dia fanomezana avy any an-danitra ny stimulator Clayderman. Fanafihana mivantana no handefasana ny vehivavy any amin'ny tampon'ny fahafinaretana. Ilay Clayderman kely sy mahery, Izy io no tsiambaratelo kely ao amin'ny boudoir anao.